Shanghai Sunshine Teknụzụ Co., Ltd.
Ihe mmetụta infrared Thermopile
Analog IR mmetụta
Digital IR mmetụta
AFE IR Ihe mmetụta
Otu-Point Infrared Okpomọkụ Mkpụrụ Mụọ
Array Infrared Okpu Okpu Igwe
Usoro mmekọrịta mmadụ na igwe
NDIR Gas Sensọ
CO2 Ihe mmetụta gas
CH4 Ihe mmetụta gas
Igwe ọkụ IR
Mmetụta na-enweghị kọntaktị
Homelọ mara mma
Infrared okpomọkụ n'usoro ...
MSA kọntaktị na-enweghị ike ...
Ihe mmetụta infrared Thermopile maka Mmetụta Ọkụ Na-enweghị Mkparịta ụka STP9CF55
Ihe mmetụta STP9CF55 thermopile infrared (IR) maka mmụba okpomọkụ na-abụghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile
inwe ihe mgbaàmà mgbapụta na-eme ka ọ dabara na ike radiesị (IR) merenụ. N'ihi
mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP9CF55 siri ike maka ụdị ngwa ngwa niile.
High nkenke Infrared Thermopile ihe mmetụta maka Non-kọntaktị okpomọkụ Mmesho STP9CF55H
Ihe mmetụta STP9CF55H thermopile infrared (IR) maka mmụba na-enweghị kọntaktị bụ ihe mmetụta IR nke thermopile nke nwere ihe mgbaàmà mgbapụta ọfụma dabara na ike infrared (IR). Site na njirimara nke nzaghachi ngwa ngwa, nha dakọtara na ntụkwasị obi dị elu, ma enwere mgbatị thermistor dị elu nke etinyere na mkpo ngwugwu, nke nwere ike ịkwụ ụgwọ ọnọdụ ihu igwe ma ọ dịghị mkpa ịhazi NTC. Ekele maka mgbochi nnyonye nke electromagnetic, ihe mmetụta ahụ siri ike maka ụdị ngwa ngwa ọ bụla ma jiri ya mee ihe na-adịghị emetụ ahụ ọkụ.
Ihe mmetụta IR Thermopile maka Nchọpụta Ọrịa Ahụ Kpọtụrụ Onye na-enweghị STP9CF55C
Ihe mmetụta STP9CF55C thermopile infrared (IR) maka mmụba okpomọkụ na-abụghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile
mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP9CF55C siri ike maka ụdị ngwa ngwa niile.
Na-abụghị kọntaktị Thermopile IR Sensor maka okpomọkụ nlekota STP9CF59
STP9CF59 ihe mmetụta infrared thermopile maka mmụba na-enweghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile
mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP9CF59 siri ike maka ụdị ngwa ngwa ọ bụla.
Kọntaktị na-enweghị ezi uche Thermopile Infrared Sensor maka Mkpụrụ Ọdịdị STP9CF59H
STP9CF59H ihe mmetụta infrared thermopile maka mmụba na-enweghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile
mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP9CF59H siri ike maka ụdị ngwa ngwa ọ bụla.
Ahụ okpomọkụ Contactless nchọpụta Infrared Thermopile mmetụta STP9CF59L0
STP9CF59L0 infrared thermopile sensor maka mmụba okpomọkụ na-abụghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile nwere volta mgbaàmà mgbapụta ọ bụla dabara na ike radiesị (IR) merenụ. N'ihi mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP9CF59L0 siri ike maka ụdị ngwa ngwa ọ bụla.
STP9CF59L0 gụnyere ụdị ihe nrụnye thermopile nke CMOS kwekọrọ n'ụdị nwere ezi uche, obere ọnụọgụ nke nnabata yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Dijitalụ ahụ ọkụ dijitalụ na-enweghị kọntaktị Infrared Thermopile Sensor STP10DF55
Ihe mmetụta thermopile STP10DF55 nke infrared thermopile maka mmetụta na-enweghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile nke nwere volta mgbaàmà mgbapụta ọ bụla dabara na ike radiesị (IR) merenụ. N'ihi mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP10DF55 siri ike maka ụdị ngwa ngwa niile.
STP10DF55 gụnyere ụdị ihe ọhụrụ CMOS dakọtara nke ọma na-egosipụta ezi uche, obere ọnụọgụ ọnụọgụ nke uche yana nrụpụta na ntụkwasị obi dị elu. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Infrared temometa maka kọntaktị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ere ọkụ Thermopile Sensor STP10DF55C
Ihe mmetụta infrared thermopile STP10DF55C maka mmụba okpomọkụ na-abụghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile nwere volta mgbaàmà mgbapụta ọ bụla dabara na ike radiesị (IR) merenụ. N'ihi mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP10DF55C siri ike maka ụdị ngwa ngwa niile.
STP10DF55C gụnyere ụdị ihe ọhụrụ CMOS dakọtara nke ọma na-egosipụta ezi uche, obere ọnụọgụ ọnụọgụ nke nnabata yana nrụpụta na ntụkwasị obi dị elu. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Ihu Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Nweta maka Nchọpụta Ahụ Achọpụta Akpaghị Aka STP10DF55C-AD
STP10DF55C-AD nke nwere ụdị ihe ọhụrụ CMOS dakọtara nke ọma na-egosipụta ezi uche, obere ọnụọgụ nke nnabata yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. A n'elu ugwu TO-ike ngwugwu nakweere maka STP10DF55C-AD, nke na-eme ka ihe mmetụta dakọtara na elu ugwu technology. Ọzọkwa, akara ahụ na ala nke STP10DF55C-AD na-eme ka nzukọ zukọta nke ihe mmetụta IR. Specialdị a pụrụ iche na-eme ka nlọghachi maka ụzọ nyocha IR. N'ihi ya, ezi contactless okpomọkụ ziri ezi na-ekwe nkwa site STP10DF55C-AD.
Okpomọkụ Sensor Thermopile IR Detector Kpọtụrụ Onye Na-ahụ Maka Ahụ Mmadụ STP11DF55
Ihe mmetụta STR11DF55 infrared thermopile maka mmụba na-enweghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile nwere volta mgbaàmà mgbapụta ọ bụla dabara na ike radiesị (IR) merenụ. Ekele maka mgbochi nnyonye nke electromagnetic, STP11DF55 siri ike maka ụdị ngwa ngwa niile.
STP11DF55 gụnyere ụdị ihe ọhụrụ CMOS dakọtara nke ọma na-egosipụta ezi uche, obere ọnụọgụ ọnụọgụ nke nnabata yana nrụpụta na ntụkwasị obi dị elu. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Nchọpụta na-enweghị ọnọdụ okpomọkụ Thermopile IR sensor na Optical Lens STP9C9L3
Ihe mmetụta thermopile STP9C9L3 infrared maka mmụba na-enweghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile nwere volta mgbaàmà mgbapụta ọ bụla dabara na ike radiesị (IR) merenụ. N'ihi mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP9C9L3 siri ike maka ụdị ngwa ngwa niile. Igwe ihe ntanetị nwere windo ihe nyocha anya na-eme ka usoro ihe mmetụta DS dị na 8: 1 site na njikarịcha njikarịcha. STP9C9L3 gụnyere ụdị ọhụrụ CMOS dakọtara thermopile sensor chip chip nwere ezi uche, obere ọnụọgụ ọnụọgụ nke uche yana oke reproducibility na ntụkwasị obi. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Nchọpụta Infrared nke Okpomọkụ Mmadụ Na-enweghị kọntaktị nyocha Thermopile IR Sensor STP11DF55C
Ihe mmetụta infrared thermopile STP11DF55C maka mmụba okpomọkụ na-abụghị kọntaktị bụ ihe mmetụta thermopile nwere volta mgbaàmà mgbapụta ọ bụla dabara na ike radiesị (IR) merenụ. N'ihi mgbochi mgbochi nnyonye anya imewe, STP11DF55C siri ike maka ụdị ngwa ngwa niile.
STP11DF55C nwere ụdị ihe nrụkọ thermopile nke CMOS kwekọrịtara na-egosipụta ezi uche, obere ọnụọgụ ọnụọgụ nke uche yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.